Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Britanika iray amin'ny dimy no nandà ny torohevitra momba ny fitsangatsanganana any ivelany
Betsaka kokoa ny olona avy any Londres nanao fialan-tsasatra tany ivelany tao anatin'ny 12 volana farany noho ny avy any amin'ny faritra UK hafa, ka 41% no nilaza fa nanao fialan-tsasatra tany ampitan-dranomasina nandritra ny fito andro na mihoatra ary 36% ihany no nilaza fa tsy nanao fialan-tsasatra mihitsy.
Olona iray amin'ny dimy no manilika ny ahiahy momba an'i Covid - ary nanohitra ny fampitandremana miverimberina avy amin'ny mpanao politika sy ny manam-pahaizana mba hijanona ao an-trano - mba hanao fialan-tsasatra any ampitan-dranomasina tamin'ny taon-dasa, hoy ny fikarohana navoaka androany (Alatsinainy 1 Novambra) nataon'ny WTM London.
Ny valin'ny tatitra momba ny indostrian'ny WTM, izay nanadihady mpanjifa 1,000 UK, dia manambara fa ny 21% amin'ny Brits dia nanao fialan-tsasatra fito andro na mihoatra tao anatin'ny 12 volana ka hatramin'ny Aogositra 2021, miaraka amin'ny 4% amin'ireo izay samy manao dia lavitra any ivelany SY mijanona.
Ny 29% fanampiny dia naka fialan-tsasatra fotsiny, raha 51% kosa no tsy nandeha nanao fialan-tsasatra tamin'ny taon-dasa, hoy ny tatitra navoaka tao amin'ny WTM London.
Ireo izay nivezivezy tany ivelany nandritra ny fiatoana fito andro na mihoatra dia nanao izany na dia teo aza ny fitalahoana miverimberina nataon'ny minisitry ny governemanta sy ny mpanolotsaina ara-pahasalamana mba tsy hivezivezy, na dia eo aza ny tahotra mety hiparitaka bebe kokoa ny Covid.
Tamin'ny fotoana samihafa tao anatin'ny 18 volana lasa, naato ny dia na tao anatiny na avy any Angletera noho ny Covid, anisan'izany ny ankamaroan'ny telo volana voalohany tamin'ny 2021, rehefa tsy ara-dalàna ny fitsangatsanganana any ivelany.
Na dia any ampitan-dranomasina aza dia Nahazo alalana, ny minisitry ny governemanta sy ny manam-pahaizana momba ny fitsaboana dia namerimberina nanentana ny olona hiala amin'ny fialan-tsasatra any ampitan-dranomasina isan-taona mba hanampy amin'ny fisorohana ny Covid.
Tamin'ny Jona 2020, ny minisitry ny fahasalamana teo aloha Helen Whately dia nilaza tamin'ny Brits fa tokony "hijery tsara" izy ireo alohan'ny famandrihana fialantsasatra any ivelany; tamin'ny Janoary 2021, ny sekretera ara-pahasalamana teo aloha Matt Hancock dia nanoro hevitra ny olona hanomana "fahavaratra britanika mahafinaritra" ary ny sekretera vahiny Dominic Raab tamin'izany fotoana izany dia nilaza fa "aloha loatra" ho an'ny Brits ny mamandrika fialan-tsasatra amin'ny fahavaratra any ampitan-dranomasina. Ny sekretera jeneralin'ny tontolo iainana teo aloha George Eustice dia nitazona hatrany fa "tsy nikasa ny handeha na hanao fialan-tsasatra any ivelany" izy, raha ny praiminisitra Boris Johnson kosa dia nilaza tamin'ny volana Mey fa tsy tokony handeha any amin'ny firenena misy lisitra amber afa-tsy amin'ny toe-javatra "extreme" ny mpanao fialan-tsasatra britanika.
Ny fahasahiranana sy ny vidin'ny fitsapana Covid, ary koa ny fisafotofotoana amin'ny rafi-jiro fifamoivoizana - indrindra fa ny loza mety hitranga amin'ny minitra farany izay nahitan'ireo mpiala sasatra nandeha an-trano tany Angletera mba hialana amin'ny confinement - mazava ho azy fa tsy nampiato ny fialan-tsasatra any ivelany. .
Ireo izay kely indrindra nanao fialan-tsasatra any ampitan-dranomasina dia avy any avaratra atsinanana, ka ny 63% amin'ny olona avy amin'ity faritra ity no milaza fa tsy nanao fialan-tsasatra mihitsy, 13% fotsiny no nilaza fa nanao fialan-tsasatra tany ampitan-dranomasina ary 25% no nilaza fa ' d nanao staycation.
Hoy ny talen'ny WTM London Exhibition Simon Press: “Miteny ho an'ny tenany ny valiny - ny fialan-tsasatra nentim-paharazana any ampitan-dranomasina dia hitan'ny Brits maro ho zavatra ilaina, fa tsy haitraitra, ary vitsy no vonona ny handao ny fito na 14 andro amin'ny masoandro mandritra ny andro. 12 volana lasa noho ny ahiahy momba ny Covid.
"Izany dia na dia mila manao fitsapana Covid lafo vidy aza, mampidi-doza ny fiovan'ny jiron'ny fifamoivoizana ary manohitra ny torohevitry ny mpitondra hijanona ao an-trano."